Tuugo dhulka uga soo dusey bangi, kadibna dhacay - BBC Somali
Tuugo dhulka uga soo dusey bangi, kadibna dhacay
15 Nofembar 2017
Image caption Godka ay tuugada ka qodeen dhulka hoostiisa
Dalka Hindiya tuugo xirfadooda aad u sarayso ayaa dhulka hoostiisa kasoo qoday god dhererkiisa dhanyahay 8 mitir, kadibna u dhacay bangi , halkaas oo ay ka dhaceen lacag badan.
Bangigan oo ay dowladda leedahay ayaa lagu magacaabaa Baroda, wuxuuna ku yaalaa magaalada Mombay ee xarunta ganacsiga dalkaas.
Tuugada ayaa isticmaalay hab la mid ah sidii lagu jilay filimkii Hollywood-ka ee The Bank Job, kaas oo dhulka hoostiisa inta lasoo qodo, bangiga dhulka looga soo baxayo.
Booliska Hindiya oo qabtay 6,000 oo didiin oo la xaday
'Boqolaal ku dhimatay' xabsiyo Hindiya ku yaalla
Nin Shiinaha u dhashay oo 50 sano ku xayirnaa Hindiya
Booliiska India ayaa BBC-da u sheegay in bangiga laga dhacay lacag iyo dahab badan, islamarkaasna ay baarayaan kiiskan.
Image caption Dukaanka ay tuugada kireysteen
Tuugada ayaa isticmaalay guri ku dhegan bangiga , halkaas oo ay dukaan ahaan u kireysteen, kadibna halkaas godka kasoo qodeen.
Waa hawl u baahan qibrad dheeraad ah, cabbir sax ah iyo waliba qorsheyn dheeraad ah.
Lama oga sida ay tuugada ugu suurtogashay in ay godka qodaan muddo bilo ah iyaga oo aanan laga shakinin.
Tuugada ayaa dhacay 30 ka mid ah 225 sanduuq oo tiiley bangiga, halkaas oo ay lacago iyo dahab ku kaydsanaayeen.
Waxa ay u egtahay in tuugada ay isticmaalayeen qalab casri ah oo ay ku burburiyeen asaaska bangiga oo caadi ahaan loo dhiso si aad u adag oo loogu talogalay in aanan hooska looga soo dhicin sida ku cad shuruucda bangiga dhexe ee Hindiya.
Image caption Bangiga la dhacay
Booliiska ayaa su'aalo weeydiinaya mulkiilaha dukaankii ay kireysteen tuugada iyo mulkiilayaasha tukaamo meesha ku dhow.
Waxay noqotey dhacdo ka fajicisey dalka Hindiya oo dhan, islamarkaasina qabsatay bogaga hore ee warbaahinta dalkaas.
Booliiska waxa ay sheegeen in falkan ay u badantahay in ay tuugada geysteen intii u dhaxaysay maalinkii jimcaha illaa maalintii isniinta, xiligaas oo uu bangiga u xirnaa maadaamaa ay ahayd maalmo fasax ah.